ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | အခမဲ့အားကစားတီဗီ
နေအိမ် / ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများအဘယ်သူမျှမကဤ site ပေါ်တွင်တည်ခင်းဧည်နေကြတယ်. သင်ဒီမှာရှာတှေ့နိုငျဗီဒီယိုမဆို Justin.tv တူသောက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အခမဲ့ဆည်းပူးစေခြင်းငှါ, Ustream.tv, Selfcast, နှင့်အခြားသော. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကတိပေးသို့မဟုတ်အာမမခံနိုင်ပါဘူးမှတ်ချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူရဲ့မဆိုအရေးယူတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်. ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမမိတ်ဖက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ပေးထားသောဗီဒီယို၏ဦးသို့မဟုတ်စမ်းချောင်းရဲ့မဆိုပိုင်ရှင်နှင့်အတူလက်တွဲရှိသည်ဖို့ကိုတောင်းဆိုကြဘူး. အားလုံးအကြောင်းအရာဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏မူပိုင်ဖြစ်ပါသည်.
1.1 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ်သော်လည်း, ကျွန်တော်ဆိုအမှားမရှိဘဲ run ဖို့နည်းပညာပိုင်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုသင်အကြောင်းကြားရန်ဖြစ်ကြောင်း. အဘယ်သူမျှမအာမခံကြှနျုပျတို့၏ website ၏ဆက်လက်စစ်ဆင်ရေးကိုရည်မှတ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်ငါတို့သည်သောကွောငျ့အမှားမြားသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ functional ဖြစ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေကိစ္စတွင်မျှတာဝန်ယူ.
1.2 သင်တို့ရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်ကျနော်တို့လုံးဝသူတို့ရဲ့အလုပ်တန်ဖိုးထား. သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျဤသတင်းအချက်အလက်အဘို့အထိုက်မဟုတ်.
1.3 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာဆွီဒင်ဥပဒေနှင့်အလိုက်နာဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကတခြားတရားစီရင်မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာဒေသခံဥပဒေများနှင့်မဆို Non-လိုက်နာမှုမရှိသောတာဝန်ယူမှုကိုယူ.
2. ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ထံမှ links
2.1 ဒီ website တတိယပါတီများအားဖြင့် run က်ဘ်ဆိုက်များမှ hypertext ကိုလင့်များရှိစေခြင်းငှါ. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များအနေဖြင့်မည်သည့်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်ရှိသည်နှင့်သူတို့အပေါ်မှာပေးထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်များတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်သငျသညျအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်ကြောင်း.
3.1 ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပေးသောမည်သည့်အချက်အလက်များ၏ပိုင်ရှင်များမဟုတ်ကြ. ထို့ကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်. ၎င်းတို့၏မူလပိုင်ရှင်တွေကိုဆန့်ကျင်ဘာမျှမရှိသည်ဆိုပါကသင်ကသတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေစေခြင်းငှါ.
မူပိုင်ခွင့်© 2015 freesport-tv.com | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ